Waraqaan Prof. Mararaa Guddinaan dhiheessan maaliif mormiin mudate? – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooWaraqaan Prof. Mararaa Guddinaan dhiheessan maaliif mormiin mudate?
BBC Afaan Oromo | Hagayya 26, 2020
Seenaa ijaarsa Itoophiyaa irratti rakkoo ture akka ka’u warri hin feene waan lamarraa madda jedhu Piroofeesar Mararaan,
“Tokkoffaan seenaa biyya kanaa sirritti beekuu dhabuudha. Lammaffaan ammoo rakkoo ijaarsa biyya kanaa irratti ture yoo beekanis akka ka’u hin barbaadan gara sanatti mil’achuus hin fedhan” jedhu.
Rakkoo siyaasaa biyyattii furuudhaaf daba saboota biyya kanaa irratti hojjetame dhoksuun hin barbaachisu jedhan hayyuun siyaasaafi Dura taa’aan paartii KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa.
(bbcafaanoromoo)–Xumura Torbee darbeetti waltajjiin waliigaltee biyyaalessaa uumuu irratti xiyyeefate paartilee siyaasaa biyyattii keessa jiran hirmaachisuun Finfinnee galma Komishinii Dinagdee Afrikaatti taa’amee ture.
Waltajjii kanarratti waraqaan pirofeesar Mararaan dhiyeessan ‘mormisiisaadha, wal dhibdee biraa kan uumudha’ jedhamuun namoota siyaasaa fi miidiyaalee tokko tokkoon komiin irratti ka’eera.
Dhimmi marii paartilee kuni marii kana dura bakka MM Abiy Ahimad argamanitti taasisan irratti kan irrati waliigalaniifi irratti mari’achuuf kan karoorfatanidha.
Waltajjii kanaratti mata duree seenaa siyaasa Itoophiyaa fi waliigalteen biyyaalessaa akkamitti dhufa kan jedhurratti barreeffama kan dhiheessan Piroofeesar Mararaa Guddinaa yaada ani dhiheesseratti hirmaattonni gartuu lamatti qoodamanii mormiin ka’e jedhan.
“Barreefamni kiyya akkaataa ijaarsa biyyattii fi yaaliiwwan sirna walqixxummaa diriirsuuf godhaman akkamitti karaarraa akka maqe, bara Sirna Minilik irraa eegalee kaaseen dhiheesse.
”Keessumaa sirni Minilik suni akkamitti ijaarame, ijaaramni sunimmoo maal fide, Oromoo fi saboota Kibbaa irratti balaa inni fide” kan jedhun dhiheesse jechuun himu.
Kanaan alattis, sirna Miniliik booda Lij Iyyaasuun akkamitti akka biyya ijaaruuf yaale, kan Haayilasillaase, dargii fi Bara Obbo Mallas bulchanii fi waan amma itti jirru fi carraa nuharkaa bahaa jiru ibse jedhan Proofesar Mararaan.
Barreeffamni isaan dhiheessan maalif mormiin mudate?
Erga Profeesar Mararaan waltajjii Sanarratti sababa rakkoo sirni Minilik ummata Oromoo fi biroo irraan gahe kaaseef mormiin namudate yaada jedhu qabu.
“Warri akka malee mormaa turan maalif waan hamaa Minilik kaaste fi sirna nafxanyaa fa’a maalif kaaste kan jedhudha.
”Sababni isaanii ammoo yaanni kuni tokkummaa keenya diiga malee fuulduratti nu hin oofu yaada jedhu kaasan” jedhan.
Faallaa kanaan immoo yaada isaanii kan deeggaranii fi dhugaa jiru haasa’uun murteessaadha warri jedhanis turaniiru jechuun dubbatan.
“Tokkoffaan seenaa biyya kanaa sirritti beekuu dhabuudha. Lammaffaan ammoo rakkoo ijaarsa biyya kanaa irratti ture yoo beekanis akka ka’u hin barbaadan gara sanatti mil’achuus hin fedhan.
”Sabni biyya kanaa rakkoo akkamii keessa akka darbee as gahe dhagahuu hin barbaadan,” jechuun himu.
Fedhii gartuu lamaa waliigaltee biyyaa miidhan…
Akka Piroofeesar Mararaan jedhanitti biyyattiin fedhii gartuu lamaa (kan isaan siyaasa Budaa jedhanii waaman) keessa jirti jedhu.
“Gartuun tokko kan jaalala biyyaa abjuurratti hundaa’e qabantu jira. Warri kuni Itoophiyaa teenya nujalaa diiguufi jedhanii watwaatu.
”Jaalalli kuni qulqulluu miti. Gama biraatiin gartuun biyya diiga jedhamee maqaan kennameesi ni jira,” jedhan.
Imalli ijaarsa biyyaa gartuu tokko quuqamaa biyyaa, gartuu kan biraa ammoo akka biyya diigutti qabatamee deemu kuni waliigaltee biyyaa akka miidhu seenaa darberraa kaasanii waltajicharatti hubchiisuus himu.
“Jaalalli gartuun tokko qofti Itoophiyaaf qaban rakkoo qaba. Dargiin Eertiraatti Amaan Amdoom ajjeesee shaabiyaan dhalate.
Hayilasillaaseen Jeneraal Taaddasaafaa hidhaa umrii guutuun dararee ABO dhalate. Kanaafuu, tokko dhiibuun rakkoo dabalataa dhala malee fala hin fidu jedheen itti hime,” jedhan.
Harkaa fi Harma Muraa Aanolee…
Wantoota seenaa keessatti raawwatan kedhamaniifi kanneen hayyuulee seenaa gidduu waldhibdeen irratti ka’u keessaa tokko seenaa Anoleeti.
Waltajjicharrati dhimmi ijoon hirmaattota gartuu lamatti qoodee walfalmisiise seenaa harma muraa fi harka muraa Aanolee kan Piroofeesar Mararaan miidhaa sirni Minilik Oromootarraan gahe jedhanii dhiheessann ture.
“Warri guyyaa sana falman ‘Aanoleen hin turre, waan sobaan uumameedha’ jedhu.
Aanoleen Finfinnee irraa KM 160 Deemanii saba sana gafaatanii dachii kanarratti maaltu ta’e jedhanii baruu ni danda’u. Kuni waan uumnee odeessinu miti” jedhan.
Waltajjii sanaan booda akkaataan miidiyaaleen dhiheessan gara ofii jedhanitti hiikanii xiinxaluus himan.
Isaan garuu seenaa kana kitaabota hayyootni sadarkaa Piroofeesaraa jiran barreessan kan sabummaan adda addaa qabanii fi muuxannoo siyaasa ofii isaanii qaban irraa akka dhiheessan dubbatu.
Rakkoo siyaasaa biyyattii furuudhaaf daba saboota biyya kanaa irratti hojjetame dhoksuun hin barbaachisu jedhan.
“Warri Minilikiin goota yeroo hundaa jedhan jiru. Warri Minilik gabroomfataadha jedhanis jiru.
”Warri kun lamaanuu sabuma biyya kanaati. Yaada kana lamaanuu lafa keenyee amma maal goonu kan jedhutu ilaalamuu qaba. Kana jechuun garuu seenaa sana haaluu fi dhoksuudhaan ta’u hin qabu” jedhan.
‘Jaalala Biyya Diigu’…
Akka Piroofeesar Mararaan jedhanitti jaalalli biyya kanaaf ana duwwaatu jira jedhu biyya diigaa deema malee hin ijaaru.
“Waltajjii sanarratti warri jaalala fakkeessanii biyya diigan akka jiran itti himeera. Warri amma biyya kana numatu jaalata jedhu kuni warra rakkoon qaba jedhu kanas yoo rakkoosaanii hin gaafatin maqaa tokkummaatin biyya diiga.
”Jaalalli abjuu warra biraa humnaan balleesuu yaalu biyyas ni balleessa” jedhan.
Mootummaa amma aangorra jiru kana ilaaleenis yaanni isaan ‘hidhaa fi ajjeechaan rakkoo biyya kanaa hin furu’ jedhee dhiheesse warra gama mootummaatii dhufan dallansiisuu akka hin hafnes himan.
Haala amma irra jirruun mormituun mootummaatti, mootummaan ammo warra mormituutti quba qabuurra aadaan balleessaa ofii amananii waliin hojjechuu dhufuu akka qabu dhaaman.